သီချင်းလေးတွေဆိုငြီးရင်း အင်္ဂလိပ်စာ လေ့လာကြရအောင်
လူငယ်တွေ အင်္ဂလိပ်စာ တိုးတက်လာအောင် တဖက်တလမ်းကနေ စာရေးသူလက်လှမ်းမှီသရွေ့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေးတွေကို ဘာသာပြန်၊ ရှင်းလင်းချက်အချို့နဲ့အတူ မျှဝေပါရစေ။ ဖျော်ဖြေမှုလည်းရ၊ စာလည်းမလေးရအောင် အတတ်နိုင်ဆုံး ထိထိမိမိ ကြိုးစားတင်ဆက်သွားပါ့မယ်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းနဲ့ အင်္ဂလိပ်စာကို လေ့လာစေချင်တဲ့အကြောင်းက စကားပြောကို နားထောင်တာထက် သီချင်းကို ထပ်တလဲလဲ နားထောင်နိုင်တယ်။ ထပ်တလဲလဲ လိုက်ဆိုနိုင်လို့ပါပဲ။ စာရေးသူ ကိုယ်တွေ့ပြောရရင် သီချင်းတစ်ပုဒ်ကို ကြိုက်မိရင် ခဏခဏနားထောင်တယ်။ ခဏခဏလိုက်ဆိုတယ်။ နောက်တော့ သီချင်းစာသား(Lyrics လစ်ရစ်ခ်စ်) ကိုပါအလွတ်ရသွားတယ်။ စာရေးသူ တက္ကသိုလ်ပထမနှစ်တုန်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆို အင်္ဂလိပ်လိုနားရည်အရမ်းဝ(Listening Skill)တယ်။ သူနဲ့ဂျိမ်း(စ်)ဘွန်းကား သွားကြည့်တာ မှတ်မိနေသေးတယ်။ ရုပ်ရှင်ထဲက ပြောတဲ့စကားတွေကို သူကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ ဘာလို့ဒီလိုနားလည်တာလဲလို့ မေးကြည့်တော့ သူကအင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကို နားထောင်လို့တဲ့။ ကိုယ်တိုင်လိုက်လုပ်ကြည့်တော့မှ သူပြောတာ တကယ့်လက်တွေ့ကျကျမှန်တယ်ဆိုတာ သိရတော့တယ်။
အစမှာတော့ မိခင်ဘာသာစကား မဟုတ်တဲ့အတွက် လက်တွန့်နေတတ်ပါတယ်။ သီချင်း ၃ ပုဒ်လောက်ကို အလွတ်ရသွားပြီးရင် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှု(Self-confidence)ရလာပြီး အရှိန်ရလာပါလိမ့်မယ်။ နားရည်ဝလာမယ်။ အပြော၊ အရေး၊ အဖတ်စတဲ့ Four Skills ကိုရလာပါလိမ့်မယ်။ ဒါတင်မက ယူတတ်ရင် စာရေးသူရဲ့ဘာသာပြန်ဟန်ကိုပါ တစေ့တစောင်း လေ့လာနိုင်ပါတယ်။ ဒီထက်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြောရရင် နောင်လူငယ်ဂီတမျိုးဆက်တွေ ကိုယ်တိုင်ရေးတဲ့ ကိုယ်ပိုင်သံစဉ်သီချင်းတွေကို ကိုယ်ပိုင်တီးဝိုင်းနဲ့ ကိုယ်တိုင်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံတကာအဆင့်မီ ဂီတသမားတွေအထိ ဖြစ်စေချင်တယ်။ သီချင်းတွေကိုတော့ MP3 နဲ့ဒေါင်းလုပ် လုပ်ထားပြီး စာသားနဲ့တွဲပြီး နားထောင်၊ လိုက်ဆိုဖို့တော့ သတိပေးပါရစေ။ မိမိကိုယ်တိုင် စကားဘယ်လိုပြောတတ်လာတာလဲလို့ စဉ်းစာကြည့်လေ။ ကလေးဘ၀က အဖေ၊ အမေတွေဆီက စကားတွေစကြားရတယ်။ ပြီးတော့ ဖေဖေ၊ မေမေဆိုပြီးမိဘတွေက ထပ်ကာထပ်ကာ ဆိုပြတော့ နားယဉ်လာရာကနေ ကိုယ်ပါမပီကလာနဲ့ ဖေဖေ၊ မေမေ လိုက်ဆိုရာက စတာပဲမဟုတ်လား။ ရိုးရိုးလေးပဲ။ အခုလည်း အစမှာ သေသေချာချာနားထောင်၊ ပြီးတော့ လိုက်ဆို၊ နောက်တော့ အလွတ်ရသွားမှာပါ။ အချိန်ကုန်ရကျိုးလည်း နပ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။
ပွဲဦးထွက်အနေနဲ့ အချစ်သီချင်းလေး(Love Song) တစ်ပုဒ်နဲ့ စလိုက်ကြရအောင်။ အမျိုးသမီး အဆိုတော်နာမည်က Bonnie Tyler(Stage Name) ပါ။ နာမည်အရင်းကတော့ Gaynor Hopkins ပါ။ သူ့ကိုဗြိတိန်မှာ ၁၉၅၁ ခုမှာမွေးဖွားပါတယ်။ ၁၉၈၀ ခုနှစ်တွေမှာ (“It’saHeartache,” “Total Eclipse of The Heart,” “Holding Out For A Hero”) သီချင်းတွေနဲ့ နာမည်ကြီးလာတာပါ။ ၁၉၇၇ ခုမှာ အသံကြိုးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ခွဲစိပ်ကုသမှု(Surgery on Vocal Cords) ခံယူပြီး သူ့ရဲ့သူမတူတဲ့ ကွဲရှရှအသံလေး(Her distinctively husky voice)နဲ့လူကြိုက်များလာခဲ့ပါတယ်။ အခုတင်ဆက်မဲ့ သီချင်းက If I Sing You A Love Song ဖြစ်ပါတယ်။
Verse 1 If I sing youalove song, will you always remember
Will you hear it on lonely nights when I’m not around
ကိုယ်မရှိတဲ့ အထီးကျန်ညတွေမှာ ကြားယောင်နေမှာလား။
Verse2If I sing youalove song, will you hear it forever
To remind you how much I cared and how I needed you
မင်းကို ကိုယ်ဘယ်လောက် အရိပ်တကြည့်ကြည့်ဖြစ်နေတယ်၊ လိုအပ်နေတယ်ဆိုတာ မင်းသိဖို့လေ။
Chorus: Love songs last longer than lovers ever do
အချစ်သီချင်းလေးတွေဟာ ချစ်သူတွေထက် ကြာရှည်ခံတယ်။
ဒါကြောင့် အချစ်ရယ်… ကိုယ်မင်းကို အချစ်သီချင်းလေး ဆိုပြပါရစေ။
အချစ်သီချင်းလေးတွေက မင်းကိုပစ်သွားမှာ မဟုတ်ဘူး။ ချစ်သူတွေကသာ ပစ်သွားတတ်ကြတာ။
Oh baby, I’m afraid it could happen to me and you
အို အချစ်ရယ်… မင်းနဲ့ ကိုယ်တို့ကြားမှာ အဲဒီလိုမျိုးဖြစ်မှာကို စိုးတယ်ကွယ်။
Verse3If I sing youalove song, let it always be with you
ကိုယ်အချစ်သီချင်းလေးဆိုပြရင် ဒီသီချင်းလေးဟာ မင်းနဲ့အမြဲရှိနေပါစေကွယ်။
တခြားသူတွေ အဝေးကိုထွက်သွားကြတဲ့အခါ ဒီသီချင်းလေးဟာ မင်းနဲ့အမြဲရှိနေပါစေကွယ်။
Oh, oh romance….Oh, lonely nights when I’m not around
အို…အချစ်ဇာတ်လမ်းလေး…အို.. ကိုယ်မရှိတဲ့ အထီးကျန်ညတွေမှာ
Baby, it’salove song so always remember on lonely nights
အချစ်ရယ်..အထီးကျန်ညတွေမှာ အမြဲသတိတရ ရှိနေပါကွယ်။
မင်းနဲ့ အမြဲနီးနီးကပ်ကပ်ရှိနေဖို့ (ချစ်နေဖို့) ကိုယ်အချစ်သီချင်းလေး ဆိုပြပါ့မယ်ကွယ်။
အခြေခံပညာ အထက်တန်းအင်္ဂလိပ်စာ အဆင့်ရှိသူတွေကို ရည်ရွယ်တာဖြစ်လို့ ၏ သည် မရွေး မရှင်းပြတော့ဘူး။ ထူးခြာတဲ့ မှတ်သားသင့်တဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ(Usage)ကိုပဲ ရှင်းပြပါ့မယ်။ ဒီသီချင်းမှာ မသိတဲ့စကားလုံးတော့ နည်းမှာပါ။
Will you remember me when I’m not around (available)? ကိုယ်မရှိရင် သတိရနေမှာလား။ remember အစား forget ကိုပြောင်းသုံးကြည့်ပေါ့။ မေ့နေမှာလား ဆိုတာဖြစ်သွားပြီ။ ဒီစာကြောင်းမှာ not around ဆိုတာ person not inaplace; not available ပါ။ အင်္ဂလိပ်စာ တကယ်ထဲထဲဝင်ဝင် တတ်ချင်ရင် အင်္ဂလိပ်လိုအနက်နဲ့ အသုံးတွေကိုရှင်းပြထားတဲ့ Eng-Eng Dictionary ကိုသုံးဖြစ်အောင်သုံးပါ။ အစမှာတော့ ခက်မှာပေါ့။ နောက်ဆို အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ဆန္ဒပြင်းပြရင် ဖြစ်ကိုဖြစ်တယ်။ နောက်မှတ်ရမှာက (on) lonely nights ပါ။ (on) the night of 10 January ဆိုရင် (ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက်နေ့ညက) ပေါ့။ ဒီလိုအသုံးတွေမှာ on ကို ချန်ထားလို့မရဘူး။ ခေါင်းထဲစွဲနေအောင် တစ်တွဲလုံးကို ကျက်ကိုထားရတယ်။ အဲဒီလိုမှ မကျက်ထားရင် သူများရေးထားတာကိုတော့ ဖတ်ကောင်းဖတ်နိုင်ပေမဲ့ ကိုယ်တိုင်တော့ ပြောနိုင်၊ ရေးနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ These animals come out at night. ဆိုရင်တော့ ဒီတိရစ္ဆာန်တွေဟာ ညကျမှထွက်လာကြတာ။ ဒီနေရာမှာ at night ဖြစ်သွားတာကို သတိပြုပါ။ night နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အသုံးတွေသိချင်ရင် အဘိဓာန်မှာရှာကြည့်ပေါ့။
I’ll love you forever. အမြဲတမ်း (တစ်သက်လုံး) ချစ်နေမှာ။ It won’t last forever. မမြဲပါဘူးကွာ။ last ဆိုတာ ကြာညောင်းတာကိုဆိုလိုတာပေါ့။ စကားလုံးတစ်လုံးမှာ အဓိပ္ပါယ် တစ်မျိုးမက ရှိတတ်တာကို သတိပြုပါ။ remind က သတိပေးတာ။ warn နဲ့မတူတာကို သတိပြုပါ။ Remind me to meet John on Sunday. တနင်္ဂနွေနေ့ကျရင် ဂျွန်နဲ့တွေ့ဖို့ ကျနော့ကိုသတိပေးပါဗျာ။ She was warned that she would lose her job if she did it again. နောက်ဒါမျိုးထပ်လုပ်ရင် အလုပ်ပြုတ်မယ်လို့ သူ့ကိုပြောတယ်။ Do you know how much I love (care for) you? ကိုယ်ဘယ်လောက်ချစ်တာ မင်းသိလား။ I don’t know where he is. သူဘယ်မှာလဲ မသိဘူး။
Love songs last longer than lovers ever do(last). အင်္ဂလိပ်စာမှာ ကြိယာကိုထပ်သုံးလေ့ မရှိဘူး။ do နဲ့အစားထိုးသုံးထားတာကို သတိပြုပါ။ Don’t leave me. ငါ့ကို မထားခဲ့ပါနဲ့။ Just leave it to me. အဲဒါ ငါ့ကိစ္စထားလိုက်။ Leave me alone. ငါတစ်ယောက်တည်း နေပါရစေ(သွားပါ။ လာမနှောက်ယှက်ပါနဲ့ကွာ ဟုဆိုလို)။ Let me see. ကြည့်ပါရစေ။ see နေရာမှာ တခြားကြိယာတွေနဲ့ အစားထိုး သုံးသွားတော့ပေါ့။ Let it be. ရှိပါစေတာ့။ I’m afraid I will not win her love. သူ့အချစ်ကို မရမှာကြောက်တယ်။ What happened to you? မင်းဘာဖြစ်လို့လဲ။ to မကျန်ခဲ့ပါစေနဲ့။ What’s going on here?(What’s happening here?) ဒီမှာ ဘာတွေဖြစ်နေကြတာလဲ။ (close to sb) She is very close to her father. သူ့အဖေကို သိပ်ချစ်တာ။ We areavery close family. ကျနော်တို့မိသားစုက သိပ်ချစ်ကြတာ။ အဘိဓာန်ရှင်းလင်းချက်တွေမှာ sb ဟာ somebody ဖြစ်ပြီး sth ဟာ something ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ စာရေးသူရဲ့ ဘာသာပြန်ပုံကို မျှဝေပါ့မယ်။ သီချင်းတပုဒ်လုံးရဲ့ ဆိုလိုရင်းကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနားလည်အောင် ဖတ်ဖို့လိုပါတယ်။ နားမလည်သေးရင် ထပ်ကာထပ်ကာဖတ်ပါ။ ပြီးမှ ဒီသီချင်းရဲ့ဆိုလိုရင်းကို မြန်မာလို(မြန်မာလို ကိုယ်ပြောလေ့ရှိတဲ့ဟန်အတိုင်း) ဆီလျော်အောင် ပြန်လိုက်တာပါပဲ။ ဥာဏ်ကွန့်မြူးနိုင်သလောက်၊ စကာလုံးကြွယ်သလောက် အခုစာရေးသူဘာသာပြန်ထက် ပိုပြီးလှပသေသပ်တဲ့ ဘာသာပြန်တစ်ပုဒ်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါလည်း ဖြစ်ကိုဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ နောက်လူတွေ ဆင့်ကဲဆင့်ကဲတော်လာမှ လူ့လောကတိုးတက်မှာမို့လား။alove song ကို သီချင်းလေးလို့ ဘာသာပြန်လိုက်တာ သတိပြုမိမယ်ထင်ပါတယ်။ သီချင်းတစ်ပုဒ်လို့ ဆိုရင်လည်းမှားပါဘူး။ ဆိုလိုရင်း မိဖို့ပဲလိုရင်းပါ။ ဘာသာစကား တစ်ခုနဲ့တစ်ခု သဘောသဘာဝမတူပုံကို သတိပြုပါ။ ဥပမာ What do you do? မင်းက ဘာလုပ်လဲ။ I amateacher. ကျနော်က ကျောင်းဆရာပါ လို့ပဲပြောတာလေ။ ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ပါလို့ မပြောဘူး။
နောက်လည်း သက်ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာအလိုက် အလျဉ်းသင့်သလို စာရေးသူသိသမျှ အိတ်သွန်ဖာမှောက် မျှဝေပါ့မယ်။ နည်းကောင်းလေးတွေတွေ့ရင် နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ မျှဝေပေးကြပါ။ ဒီထက်ပိုကောင်းတဲ့ နည်းတွေကိုလည်းထပ်ဆင့်ရှာဖွေပြီး နောက်လူငယ်တွေ ကိုယ့်ထက် အစစသာအောင်(စိတ်ဓာတ်ကအစ) လှုပ်နှိုးပေးရင်း သူတို့ကိုပါ အဲဒီလိုအသိတွေ မျှဝေပေးဖို့ တိုက်တွန်းပေးစေချင်ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်သီချင်းလေးတွေ ဆိုငြီးရင်း ဂီတ၊ ရသ၊ အလှအပ၊ ဒဿန၊ ပညာတိုးပွါးအောင် အားထုတ်နိုင်ကြပါစေ။ Utube မှာ သူ့သီချင်းတွေကို Bonnie Tyler songsဆိုပြီး ရှာရင် ရပါတယ်။ ဝေဖန်အကြံပြုတာတွေကို လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကြိုဆိုပါတယ်။
Posted by Thet Naing at 11:10 PM
အင်္ဂလိပ်စာကို အလွယ်တကူ နားလည်နိုင်မှု ပြောဆိုနိုင်မှုနဲ့ ဘာသာပြန်လေ့လာလိုသူအတွက်ပါ အထောက်အကူဖြစ်သည့်အတွက် အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
11/19/13, 1:00 PM